Bayern Munich OO Ku Guulaysatay Koobka German Super Cup | Gaaroodinet
Bayern Munich OO Ku Guulaysatay Koobka German Super Cup
August 6, 2017 - Written by Carab
Ukraine(GRN):-Ciyaar xiiso iyo xamaasad wadatay ayaa dhex martay labbada kooxood ee Bayern Munich Iyo Borrussia Dortmund taasi oo ahayd dhamaadka koobka loo yaqaan Jarmal Super Cup kaasi oo laga ciyaaro waddanka Jarmalka
Kulanka ayaa ahaa mid aad u xiisoiyo xamaasad badan kaasi oo ay labbada kooxoodba soo bandhigeen ciyaar cajiib ah iyaga oo u dagaalamayay hanshada German Super Cup ee xilli ciyaareedkan.
kulankan oo muhiimadiisa lahaa ayaa labbada kooxodba ay awoodooda iyo farsamadoodaba ay isug geeyeen siddii ay ugu guulaysan lahaayeen markii ay ciyaartu bilaabantaya waxaa markiiba goolasha furay kooxda Borussia Dortmund waxaana u xaqiijiyay goolkaasi xidiga christian Pulistic isaga oo ka faa’iidaysatay khalad ay galeen dufaaca Bayern Munich daqiiqadii 12-aad .
Kooxda Bayern Munich ayaa isku dayaysay inay goolka iska soo bogto ka hor inta aan wakhtiga nasashada la gaadhin .
Daqiiqadii 18-aad ee qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ay u suuro gashay kooxda Bayern Munich inay keento goolka bar-baraha iyaga oo uu u dhaliyay weeraryahankeeda reer Polland ee Robert Lewandowski isaga oo kulanka ku soo celiyay bar-baro 1:1
Qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay bar-baro labbada koxoodba iyaga ku noqday tabbabarayaashoodii si ay uga soo qaataan waano iyo wixii sixitaana ee u baahan in ciyaarta laga beddelo.
Daqiiqadii 18-aad ayay Bayern Munich keentay goolka bar-baraha iyaga oo uu u dhaliyay weeraryahankeeda reer Polland ee Robert Lewandowski isaga oo kulanka ku soo celiyay bar-baro 1/1.
Qaybta hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay bar-baro laba koxood ku heshiiyeen in ay sidaas ugu laabtaan qolka labiska lana soo tashadaan tababarayaashooda.
Kooxda Borussia Dortmund ayaa qaybta dambe ee ciyaarta ku bilaabatay dar-dar firfircoonan iyaga oo ciyaarayay kubada rogaal celisa ,halka Bayern Munich ay maamulka iyo maaraynta kulankaasi ay si fiican ugasoo baxday
Daqiiqadii 71-aad ayay Borussia Dortmund heshay goolkeedii 2-aad iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga weerarka uga ciyaara ee reer africa Pierre-Emerick Aubamey isaga oo hogaanka u dhiibay kooxdiisa.
Kooxda Bayern Munich ayaa dib ugu soo laabatay ciyaarta iyaga oo weeraro badan ku qaaday daafaca kooxda Borussia Dortmund si ay goolka bar-baraha u dhaliyaan ka hor inta ayna ciyaartu dhamaan.
Daqiiqadii 88-aad ayaay Kooxda Bayern Munich heshay goolka bar-baraha iyada oo uga mahad celinaya xiddiga u ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Roman Buerki oo goolkiisa si khalad ah uga dhaliyay.
Garsooraha ayaa ku qasbanaaday in uu gool ku laag qabto si ay u soo baxdo kooxda ku guulaysanaysa koobka German Super Cup loona kala saaro labada kooxood.
Ugu dambayn Kooxda Bayern Munich ayaa ku guulaystay koobka German Super Cup iyada oo ugu guulaysatay rikoorayaal 5:4 ah waxana ay sidaas ugu guulaysatay koobkii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedka cusub.